Hoos u dhac ku yimid kiisaska COVID-19 ee Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Hoos u dhac ku yimid kiisaska COVID-19 ee Soomaaliya
Guddiga la dagaalanka COVID19 ee Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa carrabka ku dhuftay in ay yaraadeen helitaanka kiisaska la xiriira xanuunka Coronovirus, isla-markaana aysan taasi ka dhigneyn in cudurku uu ka dhamaaday Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maalmihii ugu danbeeyey gudaha Soomaaliya waxaa yaraaday kiisaska la xiriira COVID19, sababo la xiriira isbadalka cimilada iyo farqiga da'da, maadaama inta badan bulshada Soomaalida ay da'doodu u dhaxeyso 20-40, sida aan ka soo xiganay bahda caafimaadka.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuje, oo ah la taliyaha Wasaarada Caafimaadka ee cudurada faafa, ayaa tilmaamay in weli uu yar yahay wacyiga bulshada ee ka hortaga cudurkan, isagoo ku baaqay in si siman loo qeybiyo talaalka, isla markaana guud ahaan bulshada ay qaataan.
Hormuudka kuliyadda Caafimaadka ee Jaamacada Soomaaliya, Dr. Yaasiin Axmed Nur, ayaa hoos u dhaca xanuunka ku macneeyey mid aan ka dhigneyn dhamaadka COVID19, isagoo bulshada ugu baaqay in ay feejignaan dheeri ah la yimaadaan.
Dr. Axmed Yuusuf Guuleed, oo isaguna ka mid ah dhaqaatiirtii ka hadashay hoos u dhaca ku yimid kiisaska xanuunka ayaa ku sababeeyey arintaasi isbadalka Cimilada, isagoo soo xigtay daraasad la sameeyey dhawaan taasoo sheegaysa in xiriir weyn uu ka dhaxeyn karo COVID19 iyo cimilada isla markaana xilligan la galay waqtiga kuleylaha.
Dhaqaatiirta qaar ayaa sheegaya in hakadka ku yimid kiisaska xanuunka ay horseedi karto waji cusub oo Coronovirus ah oo Soomaaliya ka bilawda, sida uu warfidiyeenada u sheegay Dr Cabdi Weli Xiireey oo ah xoghayaha Ururka Dhaqaatiirta Soomaaliyeed, kaasoo sidoo kalana shacabka kula taliyey in qaataan Af-saabka kuna dadaalaan gacmo dhaqashada si ay naftooda uga ilaaliyaana xanuunkaasi.
Wasaarada Caafimaadka ayaa wixii ka danbeeyey 10-kii bishan aan shacabka Soomaaliyeed la wadaagin halka ay marayaan kiisaska xanuunkaasi, iyadoo qaar ka mid ah Isbitalladii loo qorsheeyey in xanuunka lagula tacaalo oo uu ka mid yahay Martiina ay iminka qabtaan howlahoodii kale ee caafimaad, waxana yar ku baraarugsanaanta bulshada ee xanuunkan, taasoo mar kale soo celin karta waji halis ah oo COVID19 ah.
Guud ahaan dalka, Coronovirus ayaa dilay in ka badan Kun ruux, waxana uu soo ritay tiro kor u dhaafeysa 20 kun, halka ay aad u yar tahay dadka qaatay Talaalka xanuunkaasi oo Soomaaliya soo gaaray dhowr jeer.